कोही छ त्यस्तो बहादुर ? | eAdarsha.com
कोही छ त्यस्तो बहादुर ?
पर्यटकीय सुन्दर शहर पोखरा संसारको एक महत्वपूर्ण ठाउँ हो। ताल तलैया, नदी, मठ मन्दिर, गुम्बा, प्राकृतिक संरचना, हिमाली काख पाएको पोखरा आफैमा अग्रस्थानमा छ। तर पोखरा दिनानुदिन कुरुप, प्रदूषित, विकृत कोलाहल वातावरण, फोहोर शहरको रुपमा परिणत हुँदैछ। पोखराको हावापानी बदलिएको छ। गर्मी प्रत्येक वर्ष बढ्दै छ। पानी पर्ने समय ढलकिएको छ। पानी सफा छैन। ब्अष्म च्बष्ल -एसिड रेन) पर्छ। ग्लोबल वार्मि·को असर देखिदै छ। हिमाल सफा देखिदैन। तुवालो, कुहिरो लाग्छ। हिमालमा हिउँ विस्तारै कम देखिन लागेको छ। बाढी, पहिरो, भू-क्षय प्रत्येक वर्ष हुन्छ। चराचुरु·ी लोप हुँदै गइरहेका छन्। भ्अय प्रक्रियामा ग्याप देखिदैछ। मानिसको स्वास्थ्य समस्या दिनानुदिन बढ्दो छ। यसको उदाहरण विभिन्न अस्पतालहरुमा बिरामीहरुको भीडले देखाउँछ। मानिसको आयु घट्दै छ। मानिस रोगी जीवन जिउन बाध्य छन्। अब मानिसलाई धनले मात्र बचाउन सकिने भएको छ। खतरनाक रोगहरु निम्तिएका छन्। जस्तै बर्ड फ्ल्यु, स्वाइन फ्ल्यु, क्यान्सर, कालो जन्डिस, कडा निमोनिया, हेपटाइटिस, डेंग्गु, प्लेग आदिले गर्दा १०, १५ दिन १ महिना अगाडि भेटेको, बोलेको सद्दे मानिस हेर्दा हेर्दै मृत्यु भएको सुन्न, देख्न पर्दछ। विषादीयुक्त खाना तरकारी, तेल, माछा, मासु, साग, काउली, दुध, दही, घ्यू, फलफूल आदि मानिसले खाना बाध्य भएका छन्। हामीले मन्द विष खाइरहेका छौं।
अब कुरो फोहोरमैला सम्बन्धी। अहिले बाटो घाटो, घर गल्ली, जताततै सेफ्टी टंकी र सोफिटको गन्ध आउँछ। लेकसाइड, बगर, रामबजार, महेन्द्रपुल, सिर्जनाचोक, पृथ्वीचोक, विरौटा आदि ठाउँ दुर्गन्धित भइसकेका छन्। सार्वजनिक ठाउँमा फोहोर पानी फ्याक्ने, ढल तालमा मिसाउने, पानी परेको बेला सेफ्टी टंकी र सोफिटको कालो पानी बाटोमा छोडिदिने, घर होटल, रेष्टुरेण्टबाट दुर्गन्ध आइरहेको हुन्छ। नगरपालिकाको उत्तर पूर्वी गेट नजिक नालाबाट ढलको दुर्गन्धले वरिपरि वातावरण दूषित छ। नाक छोपेर हिँड्नु पर्छ। शहीद चोक सिडियो कार्यालयको पूर्वी गेट अगाडि लगभग २०० मिटर सडक धुँवा र धुलोले ढाकिन्छ, तर सम्बन्धित निकाय मौन छ। आफै नाक छोपेर हिँड्छन् तर नागरिकको लागि सहज बनाउन लाग्दैन। सास फेर्न र लिन गाह्रो भइसकेको छ। टाउको दुख्ने, श्वास प्रश्वासमा समस्या, फोक्सोमा समस्या, आँखामा समस्या, घाँटीमा समस्या धेरै देखिने लागेका छन्। धुँवा, धुलो र मैलोले पोखरालाई छोपिसक्यो। सवारी साधनको अत्याधिक अनियमित प्रयोग र यसबाट निस्कने पुरानो कालो धुँवाले मानिसलाई प्रत्यक्ष असर गरेको छ।
मानिसको स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष खेलवाड हुँदा पनि सम्बन्धीत निकाय कानमा तेल हालेर बसेको छ। स्थानीय निकाय, स्थानीय प्रशासन, स्थानीय प्रहरी, नागरिक समाज, सामुदायिक सेवा, उपभोक्ता मञ्च, स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाहरु कहाँ छन् – न यसको आवाज उठ्छ न रोकथाम हुन्छ। न अनुगमन, न कारवाही, न जरिवाना छ। कर्मचारीलाई तलब र भत्ता कसरी पचाउन भन्ने पिर छ। नागरिक समाजलाई फेसबुक, टिभी, रेडियो, पत्रपत्रिकामा नाम आएन छुट्यो भन्ने पिर। नामलाई भन्दा कामलाई ध्यान देउ। पैसालाई भन्दा सेवालाई प्राथमिकता देउ। अनि समाज बन्छ, क्षेत्र बन्छ, अनि राष्ट्र बन्छ। स्वास्थ्य विभाग, नगरपालिका यी नाम मात्रका भए। नागरिकको नैसर्ंर्गिक अधिकार प्रत्यक्ष उल्लंघन भएका छन्। न अख्तियारमा मुद्दा पर्छ न सवोर्च्च अदालतमा। कसलाई आइजीपी बनाउने भनेर सवोर्च्चमा मुद्दा पर्छ। कसले पैसा खान पाएन, कसले खायो भनेर अख्तियारमा मुद्दा पर्छ, नियम कानुन, समाज, व्यक्ति सबै बदलिएका छन्। जसको शक्ति उसको भक्ति भएको छ। छाडावादको विकास भयो। यो रोक्ने बहादुर कोही जन्मेको छैन –
दीपक वीर कुँवर,
- दीपक वीर कु“वर